Zimbabwe’s ruling party plans birthday bash for Mugabe as rumors of his demise … – Zimbabwe Daily
ZIMBABWE – Reports coming out of Harare say the ruling party has begun organizing a birthday bash for President Robert Mugabe, who turns 92 next month. Robert Mugabe was Born February 21, 1924 (age 91), Kutama, and Zimbabwe.
Zimbabwe President Mugabe Eats ‘Hostile’ Baby Elephant for Birthday. While elephants in Zimbabwe die by the thousands, when he turned 91 years old President, Robert Mugabe, last year treated his birthday party guests to a feast of elephant meat
The president’s office has confirmed that the Comrade is well on holiday in the Far East, without specifying which country the president is visiting with his family.
Zimbabwe's ruling party plans birthday bash for Mugabe as rumors of his demise …
ZIMBABWE - Reports coming out of Harare say the ruling party has begun organizing a birthday bash for President Robert Mugabe, who turns 92 next month. Robert Mugabe was Born February 21, 1924 (age 91), Kutama, and Zimbabwe. ZANU-PF provincial chairman Ezr...